Somaliland Oo Jawaab Kulul Ka Bixisay Hadal Ka Soo Yeedhay Wasiir Ka Tirsan Xukuumada Somaliya |
Somaliland Oo Jawaab Kulul Ka Bixisay Hadal Ka Soo Yeedhay Wasiir Ka Tirsan Xukuumada Somaliya
Hargeysa (GNN):- Wasiirka Warfaafinta Maamulka Somaliland C/raxmaan C/laahi Guri-barwaaqo ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeedhay wasiirka waxbarashada xukuumada Soomaaliya Cabdilaahi Goodax bare oo ahaa in guddi uu madax ka yahay ay ka shaqeynayaan inay dib usoo celiyaan hantidii shacabka ee dawladda gacanteeda ka baxday.
Wasiir Goodax ayaa sheegay in degaanada Somaliland ay ku jiraan goobaha laga soo celinayo hantidii dowlada.
Wasiirka Warfaafinta Somaliland Guri barwaaqo ayaa sheegay in hadalkaas uu yahay mid aan qiime laheyn, dowlada Soomaaliyana uusan amarkeeda ka shaqeyn karin degaanada Somaliland.
“Xukuumadda Somaliland wax qiime ah uma laha hadallada afka baarkiisa ah ee Dawladda Magac u yaalka ah ee Soomaaliya ku marin habaabinayso Ummaddeeda tabaaleysan, waxana dhaqan ka noqotay inay sheegato Somaliland oo ah dal madax bannaan oo ay kala baxeen rubuc qarni ka hor.
Dawladda Muqdisho ee ka dul talisa Tiknikada AMISOM, waxa la yaab noqotay inay shalay ku dhawaaqday inay diiwaan-gelinayso hantida Ma Guurtada ah ee dalkeeda oo ay sheegtay inay ku jirto Somaliland. Taasi oo ay uga dan leedahay inay iskaga dejiso culaysyada iyo carada shacbiga Soomaaliya kaga soo horjeesteen xaraashkii Toddobaadkii hore ay ku faasaxday Qaybo ka mid ah shiidaalka ku jira dalkaas.” ayuu yidhi wasiir Guri Barwaaqo